Budata Football Manager 2022 maka Windows
Budata Football Manager 2022
Budata Football Manager 2022,
Onye njikwa bọọlụ 2022 bụ egwuregwu nchịkwa bọọlụ Turkey nwere ike igwu na kọmpụta Windows/Mac na gam akporo/iOS ngwaọrụ mkpanaka. FM22 na -enye ụzọ ọhụụ, na -aga nihu iji chọta akụkụ mmeri gị, kụnye ụdị egwuregwu bọọlụ gị, wee merie ndị na -akwado ya. Onye njikwa bọọlụ 2022 nọ na Steam nwere mbelata 10% maka idebe ihe!
Onye njikwa bọọlụ 2022 Steam
Bọọlụ abụghị naanị ịbụ onye kachasị mma na mmeri. Ọ bụ maka ịnagide ohere, imezu nrọ gị, na inweta ihe ịga nke ọma gị site na nka na nka. Gbalịsie ike ịrịgo elu wee mee ka ụwa gị maa jijiji ma ọ bụ si na njedebe nke abis gbapụ; Ndị a bụ oge kacha atọ ụtọ.
Ị bụ onye nrụpụta akara aka klọb gị, akara aka ha dị gị naka. Imeri noge dị mkpa ma were ọnọdụ gị nakụkụ ndị njikwa iji mee ka nrọ klọb gị mezuo.
Banye na elu egwuregwu ahụ site na imezu ebumnuche nke ndị isi klọb gị na atụmanya dị elu nke ndị na -akwado ya.
Na -enyocha ụwa maka onyinye achọpụtabeghị ma ọ bụ wulite ndị otu gị nime ma zụọ ha ka ha ruo ike ha.
Rụpụta njirimara bọọlụ nke na -etinye ndị egwuregwu gị ụzọ aghụghọ na atụmatụ ezubere iji wetara ndị otu gị ihe ịga nke ọma nụbọchị egwuregwu.
Kedu mgbe a ga -ahapụ onye njikwa bọọlụ 2022?
Ekwuputala ụbọchị mwepụta nke onye njikwa bọọlụ 2022 dị ka Nọvemba 9. Accessnweta mbido ga -amalite ihe dị ka izu abụọ tupu November 9th. Dezie ihe na Steam ka ọ bụrụ otu nime ndị mbụ ga-egwu. Ị nwere ike nweta 10% ego tupu ahapụ gị site na ịzụta Onye njikwa bọọlụ 2022 maka PC/Mac site na Storelọ Ahịa SEGA, Steam, Egwuregwu Epic, Ụlọ Ahịa Microsoft. Ọnụ ego onye njikwa bọọlụ 2022 bụ 269 TL.
Onye njikwa bọọlụ 2022 Mobile
A ga -ahapụkwa onye njikwa bọọlụ 22 Mobile na Nọvemba 9. Ndebanye aha na Storelọ Ahịa App na Google Play ga-emeghe netiti etiti Ọktoba. Notu oge ahụ, a ga -ewepụta nkọwa niile gbasara ihe ọhụrụ pụtara ìhè na egwuregwu bọọlụ mkpanaka na ụbọchị ndị a. Ozugbo ewepụtara egwuregwu ahụ, a ga -ekekọrịta njikọ nbudata APK 2022 maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo.
Onye njikwa bọọlụ 2022 chọrọ sistemụ
Enyere akụrụngwa ịchọrọ igwu onye njikwa bọọlụ 2022 na PC nokpuru ihe njikwa sistemụ chọrọ obere bọọlụ 2022:
Sistemụ nrụọrụ: Windows 7 64-Bit, 8/8.1, 10
Nhazi: Intel Core 2 ma ọ bụ AMD Athlon 64 1.8GHz+
Kaadị vidiyo: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256 MB VRAM
Ohere: 7 GB nke ohere dị
Football Manager 2022 Ụdịdị